Iindaba -Zeziphi iindlela ezinokuthi zisetyenziswe namhlanje i-CNC yokusika oomatshini?
Ukusika i-Laser kukutshintsha indawo yemela yemveli ngomthi ongabonakaliyo. Inempawu zokuchaneka okuphezulu, isantya esikhawulezayo sokukhawulela, esingaphelelanga kwiipateni zokusika, ukuseta okuzenzekelayo, ukugcina izinto, ukusika okugudileyo, kunye neendleko zokulungisa eziphantsi. Iya kuphuculwa ngokuthe ngcembe okanye itshintshwe. Izixhobo zokusika zesinyithi zemveli.
Yintoni injongo yomatshini wokusika we-laser? Injongo ye-laser ukusika umatshini ayikho ngaphezu koku: ukusika, hollowing ngaphandle, ukusika imizobo, ngendlela elula, ukusika.
Izinto eziluncedo ze Guohong ifayibha laser ukusika umatshini:
1.Ukuchaneka okuphezulu kunye neslit emxinwa;
2. Isantya esikhawulezayo, umphezulu wokusika ogudileyo;
3. Impembelelo encinci yokufudumeza, akukho deformation yoomatshini yamalungu amancinci;
Ukuqhubekeka akuphelelanga kwimizobo;
5. Inoluhlu olubanzi lwezicelo kwaye iyakwazi ukuphatha izinto ezahlukeneyo njalo njalo.
Zeziphi izinto kunqunyulwa:
Iqhubekekisa ngentsimbi, carbon intsimbi, ubhedu, intsimbi ingxubevange, intsimbi lesilicon, intsimbi spring, i-aluminiyamu, ingxubevange ingxubevange, iphepha kwalenza, iphepha zinc kwalenza, iphepha pickling, igolide, isilivere, Qin kunye nezinye iimakhishithi zesinyithi kunye nokufakwa umbhobho.
Amasimi Isicelo of laser ukusika umatshini: sheet metal processing, imveliso uphawu uphawu, ibhokisi yombane kunye nemveliso kwikhabhathi yombane, ishishini lobunjineli, izixhobo zombane, izahlulo ezahlukeneyo ngoomatshini, izitya zasekhitshini, iimpahla zasekhaya, iimoto, oomatshini bezolimo, izixhobo zonyango, iinqanawa, iarospace , Ukukhanyisa, icandelo lokhuseleko lokusingqongileyo, ucingo locingo, ishishini leofisi, izixhobo zokuqina, ukuqhubekeka kwesinyithi kunye namanye amashishini. Uluhlu lwesicelo lubanzi kakhulu, kwaye lukhetho lokuvelisa kunye nokwenza amashishini.